मेरो कम्प्युटर हेर्दै | Martech Zone
करीव years बर्ष पहिले मैले मेरो कम्प्युटरको लागि ATI टेलिभिजन कार्ड किनें। म रातको साइड प्रोजेक्टहरूमा काम गर्दै थिएँ त्यसैले म आफैंलाई मेरो अफिसमा गाडिदिन र टेलिभिजनमा काम गर्ने क्रममा भेट्ने थिएँ। यो ड्युअल स्क्रिनको दिन भन्दा अघि हो, तर यसले ठूलो काम गर्‍यो र मैले यसलाई आफ्नो डेस्कटपको कुनामा सानो स्क्रीनमा हेर्न सक्दछु।
सत्य भन्नको लागि टाइम्स धेरै परिवर्तन भएको छैन ... म सफलताको लागि केहि बेर प्रतिक्षा गर्दैछु र अब यो उत्तेजित भैरहेको छ। पहिले, म लोड भयो प्रजातन्त्र टेलिभिजन। यसले फिड रिडरको जस्तो काम गर्थ्यो र मलाई परिचय गराउँथ्यो गीकब्रीफ टिभी… गीली टेक्नोलोजी सामानहरू हेर्नु कलि लुइसले यसको बारेमा कुरा गरिरहेकोसँग यत्ति सजिलो छ! मैले प्रजातन्त्रको साथ समस्या राख्न खोज्नु भनेको त्यो हो कि यो के हेरिएको थियो र यसलाई राम्रोसँग ट्र्याक गर्दैन। नतिजाको रूपमा, मैले कहिले एपिसोडहरू पत्ता लगाउन सकिन। गुड बाय डेमोक्रेसी।
केहि दिन अघि, मलाई आमन्त्रित गरियो जोओस्ट। वाह! मैले यसलाई लोड गरें र तुरुन्तै प्रभावित भएँ। पूर्ण स्क्रीन, विन्डो र सानो स्क्रिन मोडको बीच अनुप्रयोगको उपयोगिता परिवर्तन हुन्छ - अविश्वसनीय सुविधाजनक र राम्रोसँग सोचिएको। साथै, मलाई मनपर्दछ कि कतिवटा मेनू आईटमहरू देखा पर्दछन् र प्राकृतिक माउस अन्तर्क्रियासँग अदृश्य हुन्छन्। मेनूहरूले अस्पष्टताको पनि ठूलो प्रयोग गर्दछ, ताकि तपाइँ पृष्ठभूमिमा कार्यक्रम अवलोकन नगरी देखीरहेको र सुन्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ। यो निश्चित रूपमा एक हिट हुन गइरहेको छ।
केहि सहयोग पछि मित्र वेबसाइटको साथ तिनीहरू ग्राहकको लागि निर्माण गर्दै थिए, तिनीहरूले मलाई आश्चर्यचकित बनाए AppleTV। म उदारता ... र geek स्वर्ग मा छक्क थियो। मैले उनीहरूलाई भने कि यो बाटो एकदमै धेरै थियो ... र म यो फिर्ता कहिले दिदिन। Apple एप्पलटीभीले वास्तवमा तपाईंको कम्प्युटरमा टेलिभिजन हेरिरहेको छैन ... यो तपाईंको टेलिभिजनको लागि कम्प्युटरमा कम्प्युटरबाट कम्प्युटर हेर्नु जस्तै हो। हु? टेलिभिजनका लागि आइपड कल्पना गर्नुहोस् र त्यो AppleTV बराबर छ। इन्टरफेस आइट्युन वा आइपडको प्रयोग जस्तै हो र तपाईं आफ्नो पीसीसँग सिnch्क्रोनाइज गर्न सक्नुहुन्छ।
के म जान्न चाहन्छु कि कसरी मेरो नेटवर्क ड्राइभबाट एप्पलटीभीमा कुनै सि sy्क नगरीकन मिडिया लाइब्रेरी डम्प गर्न सक्छु। मसँग त्यहाँ ठूलो संगीत पुस्तकालय र हाम्रा सबै फोटोहरू छन्। म तिनीहरूलाई स्थानीय आईट्यून्स पुस्तकालयमा राख्न चाहन्न ... म तिनीहरूलाई केवल पोर्ट गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा मैले याद गरें कि तपाईं एक पटकमा एकल आईट्यून्स प्याकेजसँग मात्र जडान गर्न सक्नुहुन्छ। यो ह्याक नहुन्जेल म कुर्दिन सक्दिन ... म मेरो एप्पलटीभी लाई समग्र घरधुरी (२ म्याकहरू, २ पीसीहरू) को लागि साझा संगीत लाइब्रेरीको रूपमा प्रयोग गर्न चाहान्छु। मैले त्यो याद गरे कसैले OSX चलाउन पहिले नै AppleTV ह्याक गर्यो... हम्म। म आफ्नो नजर राख्दै छु एप्पल टिभी ह्याक्स.
वा शायद Joost केहि तरिका मा AppleTV संग हुकअप हुनेछ? कसलाई थाहा छ ... धूलो यस विस्फोटमा केहि बर्षमा बसिरहेको छ - तर म यो कहाँ लग्दछु भनेर म पर्ख्न सक्दिन।
पाइप तल आउनु पनि ब्राउजरहरूको लागि थप एड-अन विकल्पहरू हुन्। ह्याप्प टिप्स स्कोबल गर्न, एबीसी भर्खरै आफ्नो नयाँ टेलिभिजन ब्राउजर र ... WOW सुरू गर्‍यो। परिभाषा अविश्वसनीय हो र इन्टरफेस एकदम राम्रो छ। अब यदि उनीहरूले केहि शोहरू पाउन लायक पाउँदछन्!
टैग: एबीसी टेलिभिजनक्यालि लुईसकम्प्युटर टेलिभिजनप्रजातन्त्र टिभीगीकब्रीफ टिभीजुस्टस्ट्रिमिङ भिडियोटेलिभिजन
अप्रिल 8, 2007 मा 10: 17 एएम
वाह .. धेरै राम्रो। Joost धेरै रोमाञ्चक सुनिन्छ, तिनीहरूको बीटा साइन अप यस समयमा तल देखिन्छ तथापि .. त्यो बेकार छ।
अप्रिल 8, 2007 मा 10: 19 एएम
उनीहरूसँग एउटा आमन्त्रित फारम छ तर, दुर्भाग्यवस, मलाई ०0आमन्त्रित मात्र अनुमति छ! मलाई थाहा छ केहि मानिसहरु people जना मानिसहरु लाई आमन्त्रित गर्न मा सक्षम छन् ... मलाई हैन। यदि त्यो संख्या परिवर्तन भयो भने, म तपाईंलाई निश्चित गर्न सक्दछु!
अप्रिल 10, 2007 मा 3: 35 PM
अप्रिल 10, 2007 मा 3: 39 PM
म Joost द्वारा भर्खरै आमन्त्रित भएँ, तर यसले जान्छ कि उनीहरूको सफ्टवेयरले पावर पीसी समर्थन गर्दैन। बगर!